Kungani wenze i-yoga? - Afrikhepri Foundation
ngolwesithathu, febhuwari 24, 2021
Kungani wenze i-yoga?
A Ngakho-ke, uzongitshela ukuthi i-yoga yenziwa ngokwakho, ngakho kusobala. Futhi-ke, ngabona ukuthi kwakungacaci lokho. Kunezinhlobo eziningi ze-yogas, ezinye zisebenza ngokwengeziwe futhi zinamandla, ezinye ziyazindla ngokwengeziwe.
Ukuba nentshisekelo yokuzithuthukisa kanye nokufuna ukuthi ngingubani, i-yoga nokuzindla kungivumela ukuba ngifunde okwengeziwe ngami, lapho ngizijwayeza ukuqonda ngokugcwele, okusho ukuthi ngibe sesikhathini samanje, ngiwazi kahle umoya wami futhi imizwa yomzimba wami. I-Yoga eyenziwa ngalombono iyithuluzi elinamandla lokuthuthuka komuntu siqu kanye nokomoya. Ngoba, kuvumela ukuxhumana kabusha ngokwakho, emphakathini lapho kunabantu abaningi ngokwengeziwe abaphethwe yingcindezi nokukhathazeka.
Ngabe lokhu akusona isibonakaliso sokuthi kufanele wehlise ijubane futhi usuke ezweni elingaphandle elisifaka emoyeni walo, ukuze ubuyele emzimbeni wakho nasezweni lakho elingaphakathi esazi okuncane kakhulu ngalo?
Uma weqa umkhawulo wakho, umzimba uyaziveza futhi kubuhlungu. Ufuna nje ukuzwakala. Ungakwenza kanjani lokhu? Ngokuqhubeka nokuxhumana naye, ngokwazi ingxenye ngayinye yomzimba wakhe nemizwa yakhe ngokwenza ukunyakaza okuhamba kancane, ngokuthola kabusha ukuphefumula kwakhe, ngokuthulisa ingqondo engahlaliseki, futhi ekugcineni, ngenxa yokuzindla, ukuze sikwazi ukubona ingqikithi yethu , isiqu sethu sangempela, esingenayo imigoqo yangaphandle.
Lokhu ngiphakamisa ukukuhlanganyela nawe. Phinda uthole umzimba wakho ngokuzijwayeza ukuqala ukuma okulula ulungiselela ukuguquka usuke emhlabeni wangaphandle uye emhlabeni wangaphakathi, ukusuka ekuhambeni kuye ekungahambi kahle. I-Yoga nidra ivumela ukuphumula okujulile nokufinyelela okulula ekuzindleni, njengoba kwenziwa ngenkathi ulele phansi.
Usukulungele ukuzama i-adventure?
Ngakho-ke chofoza kusixhumanisi esingezansi
I-Yoga-Nidra: Imikhuba eyi-108 yokuhlanganisa ukuze uvukele i-infinity
Kugcine ukubuyekezwa ngoFebhuwari 23, 2021 5:23 PM
Owesifazane onamandla kunabo bonke emlandweni ka-Kama